DVD ka fiidiyo HD u DVD Players Normal Samee
> Resource > DVD > Sida loo sameeyo DVD ka fiidiyo HD ah u DVD Players Normal
Inta badan kaamirada dambeeyay isticmaalaan qaab AVCHD aadka u cadaadiyo,, kala duwanaansho ah H.264 loo isticmaalo in Blu-ray iyo HD DVDs, taas oo macnaheedu yahay ma waxaad ka daawan kartaa videos fiidiyo HD isticmaalaya DVD guriga SD ciyaaryahanka. Si aad u ciyaaro HD videos fiidiyo ciyaaryahanka caadi DVD guriga, waxaad u baahan tahay diinta iyo video gubi ka fiidiyo HD si DVD. Maqaalkani waxa uu ku tusi doona sida loo sameeyo DVD ka fiidiyo AVCHD ah loogu loo maqli on TV isticmaalaya ciyaaryahan DVD guriga caadiga ah.
Waxa aad u baahan tahay si ay u gubaan videos fiidiyo HD si DVD :
1. A PC awood badan (ama Mac la aalada la mid ah)
2. USB, fireware, ama kaarka akhristaha inuu u dhaqaaqo fiidiyo HD video in computer
3. software gubanaya DVD (free iyo ganacsi lagu taliyey)
4. DVD drive iyo DVD faaruq
Talaabada 1: Isku fiidiyo HD in Computer
Isticmaal bixiyo USB / Fireware cable in ay ku xidhmaan aad fiidiyo HD in computer. Marka aad u furaysto si aad u computer, dooro aragto content HD fiidiyo ah ama tag My Computer u drive fiidiyo HD ah (Your fiidiyo si toos ah ogaan doona oo ka soo muuqan doona sida disk drive adag). Next, waxaad u baahan tahay in ay u guuraan fiidiyo HD video in folder la doonayo sida faylasha sida caadiga ah on your computer. Eeg tallaabooyin faahfaahsan oo ku saabsan sida loo wareejiyo videos ka fiidiyo ugu computer . Wixii AVCHD DVD fiidiyo, taas oo si toos ah Qori video inay DVD, diinta video ka soo DVD disc hore.
Talaabada 2: Gubashada HD video inay DVD
Kala duwan ka video gaar ah Converter iyo, Wondershare DVD Creator taageertaa hal-riix si loogu badalo ka videos fiidiyo HD oo ayan u hurin si DVD disc ah daawashada TV-ga. Sii fiidiyo ah DVD menu wanaagsan-raadinta haddii muddo DVD dheer waa u fududahay navigation. Qaar badan oo arrimo DVD menu ka mid yihiin u fudud qoraalka DVD menu.
Talooyinka Gubidda HD fiidiyo Videos in DVD
1. Waxaa jira qaabab kale oo HD videos fiidiyo aad guban karta in DVD, sida fiidiyo D-VHS iyo fiidiyo miniDV. Eeg sida loo badalo videos cajalad ku salaysan 8mm in DVD halkan.
2. Xawaaraha qoraal ah oo aad DVD gubi saameeyaa tayada video ah. Haddii aad la kulanto xun video tayo leh, gubi aad fiidiyo HD videos xawaare qortaa hoose.
3. Wixii diinta videos fiidiyo HD ama DVD in qaabab la doonayo, isku day Video Converter , dhammaan qaabab loo jecel yahay waxaa taageera, sida AVI, wmv, MP4, MOV, iwm
HD Video Converter - Beddelaan HD Videos in qaabab kale
Sida loo Play DVD in Madaxweyne Siilaanyo Oo DVD Player
Talooyin Dhibaatooyinka u Common Windows DVD ee Arrimaha Kan sameeyey,
Sida loo Beddelaan dhexena si DVD
Sida loo Beddelaan VRO in DVD
Sida loo Beddelaan iyo Guba FLV in DVD ee Mac / Win (Windows 10 ka mid ah)